Jet Boeing 777-9 ọhụrụ na-efega n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Doha
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Jet Boeing 777-9 ọhụrụ na-efega n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Doha
Ụgbọ elu Boeing B777-9 ọhụrụ na-efega n'ọdụ ụgbọ elu International Doha.
Ụgbọ elu a, nke a na-atụ anya ịbanye n'ụgbọelu Qatar Airways n'oge na-adịghị anya, ga-abụ ụgbọ elu ejima ejima kasị ukwuu na nke kachasị arụ ọrụ nke ọma, na-ebuga pasent 20 dị ala mmanụ ọkụ na ikuku karịa ụgbọ elu ọgbọ gara aga.
Qatar Airways nabatara ụgbọ elu nke ọgbara ọhụrụ na mmanụ ọkụ na ọdụ ụgbọ elu Doha International.
777-9 na-ewuli elu na ezinụlọ 777 na 787 Dreamliner nke ndị njem chọrọ na ahịa.
Ụgbọ elu ahụ ga-anọ na Qatar tupu ya alaghachi na Seattle Boeing Field ka ọ gaa n'ihu na mmemme ule siri ike.
Qatar Airways taa gosipụtara ọrụ ya dị ka onye ahịa mmalite zuru ụwa ọnụ maka ọgbọ ọhụrụ Boeing Ụgbọ elu 777-9 mgbe ọ nabatara ụgbọ elu nke oge a na-arụ ọrụ nke ọma na Doha International Airport (DIA).
Ndị ọbịa VIP sonyere Qatar Airways Otu Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ikere òkè na mbata nke ụgbọ elu, nke ga-anọgide na Qatar tupu ịlaghachi na Seattle si Boeing Field ka ọ gaa n'ihu na ya siri ike ule mmemme.
Ụgbọ elu a, nke a na-atụ anya ịbanye n'ụgbọelu ụgbọ elu na-enweta ihe nrite n'ọdịnihu dị nso, ga-abụ ụgbọ elu ejima ejiri rụọ ọrụ nke ọma na nke kachasị arụ ọrụ n'ụwa, na-ebuga pasent 20 dị ala nke oriri na ikuku mmanụ karịa ụgbọ elu ọgbọ gara aga. Teknụzụ ndị dị mkpa na-enyere aka ịrụ ọrụ a bụ nku carbon-fiber composite ọhụrụ ya, injin ọhụrụ na laminar eruba nacelles.
Boeing 777-9 na-ewuli elu na ndị njem na-ahọrọ na ahịa na-eduga 777 na 787 ezinụlọ Dreamliner iji wepụta ahụmahụ ụgbọ elu nke ọdịnihu. Ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ga-enwe ọrịre elu ụlọ dị ntụsara ahụ, iru mmiri ka mma, ịnya igwe dị nro, ọnụ ụlọ sara mbara, windo buru ibu na ihe owuwu sara mbara.
Qatar Airways Otu Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, kwuru, sị: "Ọ bụ azụ na 2013 na Qatar Airways Group na mbụ mara ọkwa ya atụmatụ itinye ego na Boeing ọhụrụ ọgbọ ugbo elu.
"Mgbe ị gachara Boeing ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Everett, Washington na Septemba 2018, anyị nwere ohere ilele 777-9 nso n'onwe ya, mana taa bụ ohere mbụ maka ụgbọ elu na ndị ọbịa VIP anyị na-akwanyere ùgwù ịhụ nkwa anyị siri ike na ụgbọ elu a dị egwu ebe a Qatar. ka ọ bịarutere na nke mbụ.
"Anyị nwere nnukwu mpako ịbụ onye ahịa mmalite zuru ụwa ọnụ maka ngwaahịa a na-eduzi ụlọ ọrụ, yana inwe ike igosipụta nkwa anyị maka ịga n'ihu na-akwado netwọkụ ụwa na-eme nke ọma na ụgbọ mmiri nke gụnyere nke ọdụdụ, teknụzụ kachasị elu na ejima rụọ ọrụ nke ọma. ụgbọ elu engine n'ụwa."
Onye isi oche Boeing Commercial Airplanes na CEO, Mr. Stan Deal, kwuru, sị: "A na-asọpụrụ anyị site na Qatar Airways 'nkwenye na-adịgide adịgide na 777-9 na mmekorita na ihe ọhụrụ ọ na-anọchi anya ya. Site na mmụba ya na-enwetụbeghị ụdị ya na nrụpụta mmanụ ọkụ na ikuku na ọkwa nkasi obi ọhụrụ, anyị na-atụ anya ịhụ 777-9 na-atọ ndị njem Qatar Airway ụtọ ruo ọtụtụ afọ na-abịa.